Akhriso: Sababta uu Dib ugu Dhacay Kulanka Farmaajo iyo Xisbiyada Qaran – Goobjoog News
Warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu dib u dhacay kulan lagu waday in uu saaka madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo la yeesho dhammaan xisbiyada qaran ee dalka ka jira.
Ilo ka tirsan xisbiyada oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegaya in agaasimaha Madaxtooyada Qaranka Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fuursade uu la soo xiriiray hoggaanka xisbiyada una sheegay in shirkii lagu waday maanta uu u dib dhacay sabtida 9:30 subaxnimo. Sababta waxaa lagu sheegay Farmaajo oo kulamo kale oo degdeg ah galaya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa shalay kulan gaar ah waxaa uu la yeeshay madaxweyneyaashii hor Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh, waxaana lagu go’aaamiyey:
Qodobada Madaxweyneyaashu ka wada haldeen, la iskuna afgartay:
1. Farmaajo wuxuu ka garaabay kana soo hoyday ficiladii foosha xumaa ee ay kula dhaqmeen Madaxweyneyaashii hore.
3. Inla dhowro dastuurka, xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed.
4. Ciidamada siyaasada in laga dhex saaro. Siyaasiintuna aysan amniga siyaasadeyn.
Dhageyso: Waxgaradka Galmudug Oo Baaq Ka Soosaaray Khilaafka Madaxda Maamulka
Muuse Biixi Oo Magacaabay Guddiga Xaquuqul Insaanka
Haweeney Ajaanib Ah Oo Lagu Qafaashay Muqdisho
Kthuxs vxwkpo Buy viagra internet cialis for sale
Nibsgm kbjuii Buy cialis cheap cialis over the counter
Nfzkxy uofytz Approved cialis pharmacy over the counter cialis
Enrobp livvxq Get cialis best online pharmacy
Agaasimaha Guud Ee Madaxtooyada Puntland oo Xilka La Wareegay
-- https://www.dnfl150.com/royal 로열카지노...
-- https://www.dnfl150.com/joy 조이카지노...
-- https://www.dnfl150.com/first 퍼스트카지노...
optional health care viagra abortion...
-- https://www.dnfl150.com/yes 예스카지노...